ကျနော့်ရဲ့ ရိုက်ချက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ကျနော့်ရဲ့ ရိုက်ချက်များ	16
Posted by kotun winlatt on Aug 15, 2016 in Photography | 16 comments
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ကြည့်ရတာ မျက်စိအေးပါ့ဗျား…
ပုဇဉ်းပုံတစ်ခုပဲ ပုဇဉ်းထက် အနောက်က ဘောလောမျောနေတာလေးကို ပြူးပြဲကျိမိတယ်..
kotun winlatt says: ငင် . . . ပေါလောပေါ်နေတာက ရေညှိပါ အူးအူးရာ လယ်ကွက်ထဲမှာ အူးအူးထင်တဲ့ အတုံး မရှိပါဘူးဗျာ
kai says: တိမ်တောက်ချိန်အထိစောင့်ရင်.. ရွှေနဲ့မြ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: မနေ့က လက်ဆော့တာ စိတ်ကြိုက်ပုံ မရခဲ့ဘူး တိမ်တောက်ချိန်ရိုက်ထားတာတွေ နောက်ရက်တင်ပါ့မယ် တဂျီးရေ . . .
မမချွိ says: ရိုက်ချက်ပြင်းလှချည်လား ဆရာ
kotun winlatt says: စိတ်တိုင်းမကျလို့ စိတ်ကြိုက် မရိုက်ခဲ့ရဘူးးဆို
ကျော်လွင်ဖြိုး says: ပထမဆုံးပုံ ရထားလမ်း ပုံလေး သဘောကျတယ်။
kotun winlatt says: ပုံထဲမှာသာ လှနေတာ အပြင်မှာ အီးအီပုံတွေ ရှိနေတတ်တယ် . . . ဟီးးးး
ကျော်လွင်ဖြိုး says: ဖဘ က အဖက်ပိနေတဲ့ မမ တွေ ပုံတွေ ခဏခဏ မြင်နေရလို့ ဖြေတွေး တွေးတတ်နေပါပြီလေ။း)
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: goodတယ်
Ma Ei says: စိမ်းစိုနေတဲ့ စပါးခင်း ရေမြောင်းကလေးနဲ့ လှလိုက်တာ
ဒါထက် ဒီစပါးခင်းတော့ ရေမမြုပ်လောက်ပါဘူးနော်…
Foolish Girl says: ပုံနံပါတ် 1, 2,6တွေကို ကြောက်တယ်
Foolish Girl says: ပုံနံပါတ် 1, 2,6တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ လက်ကမှားရေးမိလိုက်တာကို Submit Comment နှိပ်ပြီးမှမြင်လိုက်လို့ Sorry ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: မိုပ်မိုက်မိုက်
အောင် မိုးသူ says: စိမ်းစိမ်းစိုစို
Thint Aye Yeik says: အားးးးလားးးးးလားးးးး
ဓါတ်ပုံရိုက်တော့လည်း အင်မတန် ကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံကောင်းလေးတွေ ဖန်တီးနိုင်တာပါပဲလား